‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार हामीले नगरे कसले गर्ने ?’ - Hamrokhotang
Home » Gatibidhi » News » Photo Gallary » ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार हामीले नगरे कसले गर्ने ?’
‘शैक्षिक गुणस्तर सुधार हामीले नगरे कसले गर्ने ?’
By: HamroKhotang.com on Saturday, December 27, 2014 /
पुस–१२, ‘शिक्षामा राज्यको करोडौं खर्च भइरहेको छ, तर नतिजा सन्तोषजनक छैन, यसरी एकोहोरो खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न हामी के गर्न सक्छौँ ? यसका दोषी को–को हुन् ?’ खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलमा आयोजित ‘गुणस्तरिय शिक्षाका लागि हाम्रो भूमीका’ विषयक कार्यक्रममा प्राध्यापक डा. बिद्यानाथ कोइरालाले प्रश्न गरिरहँदा कार्यक्रम हल शान्त भयो । निकैबेरसम्म कसैको केही जवाफ आएन । प्राध्यपक डा. कोइरालाको प्रश्नले सन्नाटा छाएको समिक्षालय हलमा उपस्थित प्राध्यपक, प्रधानाध्यपक, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुले पनि बिस्तारै आ–आफ्नो तर्क र जिज्ञासाहरु पेश गरे । प्राध्यपक डा. कोइरालामाथि पनि उत्तिकै प्रश्न र जिज्ञासाहरु ओइराइयो । कसैले ‘विद्यार्थी नपढ्नाले शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको’ भने, कसैले ‘अबिभाबककै कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको’ तर्क गरे । कहीँ शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको दोष ‘शिक्षक’लाई लगाईयो, कहीँ ‘अस्थिर राजनीति’लाई लगाइयो ।
दिक्तेलमा आयोजित ‘गुणस्तरिय शिक्षाका लागि हाम्रो भूमीका’ विषयक कार्यक्रममा प्राध्यपक डा. विद्यानाथ कोइराला (कुर्सीमा बायाँबाट दोश्रो) ।
शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा दल, अबिभाबक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षा नीति, संरचना लगायतमाथि दोष लगाइरहँदा प्राध्यपक डा. कोइरालाले भने अरुलाई दोष नदिन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरे । ‘कक्षामा पस्ने हामी, पढाउने हामी, सिकाउने हामी, अनि दोष चाहीँ अरुलाई दिन मिल्छ ?,’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘आफै भान्छे अनि नुन, तेल पुगेन भन्दै हिँड्ने की त्यसको व्यवस्थामा लाग्ने ? अनि हामी पनि दोषी हौँ कि होइनौँ ?,’ कोइरालाले स्तरिय शिक्षण क्रियाकलापका सन्दर्भमा आफ्नो गुणस्तर आफैले छुट्याउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘शैक्षिक गुणस्तरको छु की छैन भनेर पहिला हामी आफुले आफैलाई चिन्न र बुझ्न सक्नुपर्छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘मेरै कमजोरी पो छन् की, पढाउने तरिका पो भएनन् की भनेर चिन्तन गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।’
शिक्षकले ‘नगर्नेको बाहनाबाजी’ गर्दै शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको दोष अरुलाई देखाएर पन्छिन नहुने कोइरालाको तर्क छ । सामाजिक उत्तरदायीत्व कार्यक्रम अन्तरगत सालपा बिकास बैंक खोटाङको आयोजना तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा प्राध्यपक डा. कोइराला काठ्माण्डौंबाट दिक्तेल आउनु भयको हो । शैक्षिक क्षेत्रमा प्रभाव छाड्न सफल कोइरालासँग शैक्षिक सवालमा प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने मौकाका लागि जिल्लाका प्राध्यपक, प्रधानाध्यपक, शिक्षक, बिद्यार्थी, बुद्धिजिबी, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत उत्सुकताकासाथ कार्यक्रममा आएका थिए । सहभागीको भीडले बिहिबार जिबिसको समिक्षालय हल दिनभर खचाखच भरिएको थियो ।
प्राध्यपक डा. कोइरालाले शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थीलाई सन्तुष्टी दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘विद्यार्थीलाई सन्तुष्टी दिन सक्नु नै शैक्षिक गुणस्तर हो,’ उहाले थप्दै, ‘विद्यार्थीले मन पराए भने त्यही हो गुणस्तरिय शिक्षा ।’ अधिकांश शिक्षकहरु दलका नेताझैँ बनीरहेको भन्दै प्राध्यपक डा. कोइरालाले उनीहरुलाई पेशाकर्मी बन्न सुझाव दिनुभयो । ‘हामी खत्तम होइन, गतिला शिक्षक बनौँ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘अव पढाउने मात्र होइन विद्यार्थी सँगै पढ्ने र सिक्ने पनि गरौँ, पार्टीको होइन विद्यार्थीको शिक्षक बन्न सिकौँ ।’
हालसम्म शिक्षक तालिमको सदुपयोग नभएका कारण तालिमको बिधि फेर्नुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ ।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरुले पनि प्राध्यपक डा. कोइरालाको भनाइप्रति समर्थन जनाउदै शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयमा खुलेर अन्तरक्रीया गरेका छन् ।
संघीय समाजबादी पार्टीका नेता प्रेम राईले शिक्षकहरुमा ‘ठेत्तरो प्रबृत्ति’ बढेको आरोप लगाउनुभयो । प्राध्यपक धनकर्ण श्रेष्ठले कतिपय राम्ररी पढ्न समेत नजान्ने विद्यार्थी क्याम्पस तहमा अध्यायन गर्न आउने गरेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । श्रोतव्यक्ती प्रतिमान राईले फेल नगराउने नीतिले ‘नपढ, नपढाए हुन्छ’ भन्ने गलत मानसिकताको बिकास गरेको उल्लेख गरेका छन् । शिक्षक धनीराम राईले कलिला छात्रछात्राको लेखन सिकाइका बिषयमा शिक्षकले उचित ध्यान नदिएको बताउनु भयो ।